Maxkamadda ciidanka qalabka sida oo xukuno ku riday askar ka tirsan ciidanka DFS | Bartamaha
Sii Akhri - Read the full post
Beledweyne(Bartamaha) Maxkamadda Ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ee magalaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Hiiraan. Maxkamadda ciidanka qalabka sida ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa la horkeenay 10 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku kala eedeysnaa […]
By Caadil Mar 15, 2015 No Comments 1 Views
Beledweyne(Bartamaha) Maxkamadda Ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ee magalaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Hiiraan.
Maxkamadda ciidanka qalabka sida ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa la horkeenay 10 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku kala eedeysnaa gacan ku dhiiglanimo,amar diido iyo sidashada hub sharci darro ah.
Maxkamadda ciidanka qalabka sida ee magaalada Beledweyne oo u fariisatay qaadista dacwada loo haystay askartan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa soo saartay xukuno kala gadisan oo ku dhacay eedeysanayaashii la horkeenay .
Maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa ku xukuntay askartii lagu helay iney dileen qofka rayidka ah iney bixiyaan diyada qofkii ay dileen maadaama ay dilka geysteen xilli sida ay maxkamaddu sheegtay ay ku dabajireen rag ka tirsan Al-shabaab.
Askarta kale ayaa waxaa lagu xukumay xabsiyo u dhexeeya Lix bilood ilaa Sanad xabsi ciidan ah,Maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa mudooyinkii danbe gobolada dalka ka waday maxkamadaynta ciidamada xoogga ee fal danbiyeedyada geysta.
Maamulka Jubba oo ku hanjabay inay u aargudi doonaan Taliyihi Nabad sugida maamulka Kismaayo
Muqdisho oo Maanta deggan.
Shir laga falanqaynayo sahaminta shidaalka Soomaaliya oo ka furmay magaalada London
Hees Cusub Saada Cali Warsame Utashada Dalkiina
Mashruuc loogu magac daray Gol-dagob Library Project oo ka dhacay Gobolka Minnesota(Daawo).
Xafiis baasa boorada Soomaaliga ah laga qaadanayo oo laga yagleeyay K/afika